Lahatsoratra nosoratan'i Henry Bell
Henry Bell no lehiben'ny vokatra ao amin'ny Vendorland. Izy dia teknolojian'ny fandraharahana mitondra fitomboana manovaova amin'ny alàlan'ny paikady teknolojia nomerika. Henry dia famahana olana be famakafakana sy fiaraha-miasa miaraka amin'ny fahaiza-manao cross-functional miavaka amin'ny fitarihana vokatra, ny fitantanana ny fampiharana ary ny famakafakana data.
Zoma, Oktobra 29, 2021 Zoma, Oktobra 29, 2021 Henry Bell
Efa nieritreritra ve ianao fa ny solosaina dia mety ho afaka mamantatra sy mianatra lamina mba handraisana fanapahan-kevitra manokana? Raha tsia ny valinteninao, dia mitovy amin'ny manam-pahaizana maro amin'ny indostrian'ny e-varotra ianao; tsy nisy afaka naminavina ny toetrany ankehitriny. Na izany aza, ny fianarana milina dia nitana anjara toerana lehibe tamin'ny fivoaran'ny e-varotra tao anatin'ny folo taona farany. Andeha hojerentsika hoe aiza no mety amin'ny e-varotra